सावधान ! झुकिएरपनि नराख्नुहोस् फेसबुकमा यस्ता गोप्य कुरा – SN-One of the top news portal in Nepal, Trusted news …
सावधान ! झुकिएरपनि नराख्नुहोस् फेसबुकमा यस्ता गोप्य कुरा
२०७६ जेष्ठ १९, आईतवार १७:१९ मा प्रकासित
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल आधुनिक दिनका लागि अभिन्न अंग बनेको छ । इन्टरनेट अनिवार्य साधन भइसकेको हुनाले यस्ता सामाजिक सञ्जालले कुराकानीलाई सजिलो र सस्तो पनि बनाइदिएका छन् । संसारभर भएका घटनाको ताजा अपडेटमात्र होइन, टाढा रहेका आफन्तसँग तत्कालै भिडियोमा कुराकानी गर्न सकिन्छ। घरबाटै काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ । सजिलोसँगै अप्ठ्यारा र जीवनमा सरलता ल्याउने इन्टरनेटकै बाटोबाट भित्रिने जटिलता पनि छन् ।
समाजिक सञ्जालमा सन्देशहरु प्रवाह गर्दा सामान्य होसियारी अपनाउँदा इन्टरनेटकै कारण हुन सक्ने जोखिम कम हुन्छ । फेसबुक या सामाजिक सञ्जालमा बिर्सेर पनि आफ्नो पे चेक,क्रेडिट कार्ड, अनलाइन खरिद बिल र बैंक एकाउन्टका तस्वीर पोष्ट गर्नुहुँदैन । यदि तपाइँले यसो गर्नुभयो भने निकै ठूलो गल्ती हुनसक्छ । तपाइँले पोष्ट गरेको तस्वीरका आधारमा कम्प्युटर ह्याकरले तपाइँको बैंक एकाउन्टमा रहेको पैसा समेत चोर्न सक्छन् ।
यस्ता कुरामा ध्यान दिउँ
कुनै व्यक्तिको मनमा किन आउँछ आत्महत्याको सोच, यसरी थाहा हुन्छ पहिला नै…